Aịzaya 28 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
28 Ahụhụ ga-adịrị okpueze dị ebube nke ndị aṅụrụma Ifrem,+ na okooko osisi na-achanwụ achanwụ nke e ji chọọ ya oké mma, nke dị n’isi ndagwurugwu na-eme nri nke ndị mmanya na-egbu! 2 Lee! Jehova nwere onye dị ike, nke nwekwara ume.+ Dị ka akụ́ mmiri ígwé nke na-ezosi ike+ na égbè eluigwe, mmiri ozuzo nke na-ebibi ihe, dị ka oké mmiri ozuzo nke idei ya na-asọsi ike+ na égbè eluigwe, otú a ka ọ ga-eji ike tụda ya n’ala. 3 A ga-eji ụkwụ zọda+ okpueze niile dị ebube nke ndị aṅụrụma Ifrem. 4 Okooko osisi na-achanwụ achanwụ+ nke e ji chọọ ya mma, nke dị n’isi ndagwurugwu ahụ nke na-eme nri, ga-adị ka mkpụrụ fig mbụ+ nke mịrị tupu oge ọkọchị, nke ọ na-abụ, mgbe mmadụ lere anya hụ ya, ọ na-eri ya ozugbo ọ batara ya n’aka. 5 N’ụbọchị ahụ, Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-aghọrọ ndị ya fọdụrụ afọdụ+ okpueze nke ịchọ mma+ na okpu mara mma,+ 6 ghọọkwara onye nọdụrụ ala ikpe ikpe+ mmụọ nke ikpe ziri ezi, ghọọkwa ike nke ndị na-anọ n’ọnụ ụzọ ámá achụghachi ndị agha.+ 7 Ndị a akpafuwokwa n’ihi mmanya, ha awagharịwokwa n’ihi mmanya na-egbu egbu. Onye nchụàjà na onye amụma+ akpafuwo n’ihi mmanya na-egbu egbu, mmanya emegharịwo ha anya, ha awagharịwo+ n’ihi mmanya na-egbu egbu; ha akpafuwo n’ọhụụ ha, mmanya ekweghịzi ha mara ihe ha na-ekpe n’ikpe. 8 N’ihi na tebụl niile ejupụtawo n’agbọ na-asọ oyi.+ O nweghị ebe ọ na-adịghị. 9 Ònye ka a ga-akụziri ihe,+ ònyekwa ka a ga-eme ka ọ ghọta ihe a nụrụ?+ Ọ̀ bụ ndị a kwụsịrị ara, ndị a napụrụ ara?+ 10 N’ihi na ọ bụ “ihe e nyere n’iwu n’elu ihe e nyere n’iwu, ihe e nyere n’iwu n’elu ihe e nyere n’iwu, eriri e ji atụ̀ ihe n’elu eriri e ji atụ̀ ihe, eriri e ji atụ̀ ihe n’elu eriri e ji atụ̀ ihe, ntakịrị n’ebe a, ntakịrị n’ebe ahụ.”+ 11 N’ihi na ọ ga-esi n’egbugbere ọnụ nke ndị na-asụ nsụ,+ nakwa n’asụsụ dị iche,+ gwa ndị a okwu,+ 12 bụ́ ndị ọ sịrị: “Ebe a bụ ebe izu ike. Meenụ ka onye ike gwụrụ zuru ike. Ebe a bụkwa ebe ntụsara ahụ́,” ma ha achọghị ige ntị.+ 13 Okwu Jehova ga-abụkwara ha “ihe e nyere n’iwu n’elu ihe e nyere n’iwu, ihe e nyere n’iwu n’elu ihe e nyere n’iwu, eriri e ji atụ̀ ihe n’elu eriri e ji atụ̀ ihe, eriri e ji atụ̀ ihe n’elu eriri e ji atụ̀ ihe,+ ntakịrị n’ebe a, ntakịrị n’ebe ahụ,” ka ha wee gaa ma dalaa azụ, e wee gbajie ha, matakwa ha n’ọnyà wee jide ha.+ 14 Ya mere, nụrụnụ okwu Jehova, unu ndị na-etu ọnụ, unu ndị nọ na Jeruselem na-achị ndị a:+ 15 N’ihi na unu sịrị: “Anyị na Ọnwụ agbaala ndụ;+ anyị na Shiol ahụkọwo ọhụụ;+ ọ bụrụ na oké idei mmiri nke na-achị ọkụ asọfee, ọ gaghị erute n’ebe anyị nọ, n’ihi na anyị emewo ka ụgha bụrụ ebe mgbaba anyị,+ anyị ezoola n’okwu ụgha.”+ 16 Ya mere, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Lee, ana m edo otu nkume+ na Zayọn ka ọ bụrụ ntọala,+ bụ́ nkume kwesịrị ntụkwasị obi,+ nkume nkuku dị oké ọnụ ahịa+ nke ntọala siri ike.+ Ọ dịghị onye na-enwe okwukwe na ya nke ụjọ ga-atụ.+ 17 M ga-eme ka ikpe ziri ezi bụrụ eriri e ji atụ̀ ihe,+ meekwa ka ezi omume+ bụrụ ihe ọ̀tụ̀tụ̀; akụ́ mmiri ígwé+ ga-ekpochapụ ebe mgbaba ụgha ha,+ mmiri ga-ebupụkwa ebe ahụ ha zoro.+ 18 A ga-emebi ọgbụgba ndụ ahụ unu na Ọnwụ gbara,+ ọhụụ ahụ unu na Shiol hụkọrọ agaghị enwe isi.+ Mgbe oké idei mmiri ahụ na-achị ọkụ ga na-asọfere,+ unu ga-aghọkwara ya ebe ọ ga na-azọtọ azọtọ.+ 19 Mgbe ọ bụla ọ na-asọfere, ọ ga-eburu unu,+ n’ihi na ọ ga na-asọfe n’ụtụtụ ọ bụla, n’ehihie nakwa n’abalị; ọ dịghịkwa ihe ọzọ ọ ga-abụ ma ọ bụghị ihe na-akpata ịma jijiji+ ka o wee mee ka ndị ọzọ ghọta ihe a nụrụ.” 20 N’ihi na ihe ndina dị mkpụmkpụ nke na mmadụ apụghị ịgbatị onwe ya n’elu ya, ákwà a kpara akpa dịkwa warara nke na mmadụ apụghị iji ya kpuchie onwe ya. 21 N’ihi na Jehova ga-ebili dị ka o biliri n’Ugwu Perezim,+ ọ ga-ewe iwe dị ka o were na ndagwurugwu nke dị nso na Gibiọn,+ ka o wee mee ihe ọ na-eme, ihe ọ na-eme dị ịtụnanya, ka o wee rụọ ọrụ ya, ọrụ ya na-eju anya.+ 22 Ugbu a, unu abụla ndị na-akwa emo,+ ka agbụ unu wee ghara isi ike, n’ihi na ọ dị mbibi nke ga-abịakwasị ala a dum,+ ee, ihe e kpebiworo ime, nke m nụrụ n’ọnụ Ọkaakaa+ Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha. 23 Ṅaanụ ntị nụrụ olu m; geenụ ntị nụrụ okwu m. 24 Onye na-akọ ugbo ọ̀ ga-eji ogologo ụbọchị dum+ na-akọ ala ka o wee kụọ mkpụrụ, na-egburi ala ubi ya, na-etirikwa ya?+ 25 Mgbe o mesịrị ka ebe ahụ dị larịị, ọ̀ bụ na ọ naghị agha mkpụrụ kọmin ojii, ghaakwa mkpụrụ kọmin,+ ọ̀ bụ na ọ gaghị akụ ọka wit, ọka milet,+ na ọka bali n’ebe kwesịrị ekwesị,+ kụọkwa ọka spelt+ ka ọ bụrụ ókè nke ala ya?+ 26 A na-agbazi+ ya ime ihe ziri ezi. Chineke ya na-ezi ya ihe.+ 27 N’ihi na ọ bụghị ihe e ji eticha mkpụrụ+ ka a na-eji etichapụta mkpụrụ kọmin ojii; a naghịkwa eji ụkwụ ụgbọala arị mkpụrụ kọmin elu. N’ihi na ọ bụ okporo osisi+ ka a na-ejikarị etichapụta mkpụrụ kọmin ojii, jirikwa mkpara tichapụta mkpụrụ kọmin. 28 À na-anọ na-etichapụta ọka a chọrọ iji eme achịcha ruo mgbe a kụriri ya? N’ihi na ọ dịghị mgbe mmadụ ga na-azọcha+ ya n’akwụsịghị akwụsị.+ Ọ ga-eme ka ụkwụ ụgbọala ya nke ịnyịnya na-adọkpụ rịa ya elu, ma ọ gaghị akụpịa ya.+ 29 Ihe a bụkwa ihe si n’aka Jehova nke ụsụụ ndị agha,+ onye nzube ya dị ebube, onye rụworo oké ọrụ bara uru.+